သမီးကွီး မွမိုးဂင်ျဂါကို သူမရှိတဲ့အီတလီနိုငျငံကို ချေါခငျြပမေယျ့ ချေါလို့မရတဲ့အဓိကအကွောငျးအရငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ခမျြးခမျြး –7Day Daily News
အဆိုတျော ခမျြးခမျြးကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတျဒိတျကြဲ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှုကိုလညျး မြားစှာရရှိထားတဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဆယျစုနှဈတဈခုကွာ အနုပညာအလုပျတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျခဲ့တဲ့ သူမကအခဈြသီခငျြးတှသောမကပဲ အဆှေးသီခငျြးတှကေိုလညျးစိတျခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီဆိုလရှေိ့တဲ့သူတဈယောကျပါ။
အခုလိုအောငျမွငျမှုတှရေရှိခဲ့တဲ့ခမျြးခမျြးဟာ လကျရှိမှာဆိုရငျ ခငျပှနျးသညျရှိရာအီတလီမှာသှားရောကျနထေိုငျနတောဖွဈပါတယျ။ခမျြးခမျြးကတော့ မွနျမာပွညျမှာကနျြခဲ့တဲ့ သမီးကွီးကိုလညျး လှမျးနရေငျး သမီးငယျလေးအပျေါမှာလညျး အရမျးကိုခဈြပွီး အရိပျတကွညျ့ကွညျ့နဲ့ ခဈြနတော ဖွဈပါတယျနျော..
တဈခါတဈလမှောလညျး သမီးငယျလေးရဲံခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေိုလညျးပရိသတျကွီးအတှကျ တငျပေးနကွေဖွဈပါတယျ. ခမျြးခမျြးကတော့ သမီးငယျလေးနဲ့ အတူနနေရေပမေဲ့ သမီးကွီးကိုလညျး လှမျးနမှောအသခြောပါပဲနျော..
ခမျြးခမျြးတငျလာခဲ့တဲ့ ပို့ဈတဈခုအောကျမှတော့ သမီးကွီးပါ အီတလီကို မချေါဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတဈခုကို ခမျြးခမျြးက ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော.. သူမကိုယျတိုငျလညျး မိခငျကောငျးတဈယောကျဖွဈတာမို့ သမီးကွီးကိုလညျး လှမျးနတေဲ့ခမျြးခမျြးကိုခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ခမျြးခမျြးတို့ သားအမိနှဈယောကျ အမွနျပွနျလညျ ဆုံဆညျးနိုငျစဖေို့ ဆုတောငျးပေးသှားကွပါဦးနျော။
အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်း များစွာရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကအချစ်သီချင်းတွေသာမကပဲ အဆွေးသီချင်းတွေကိုလည်းစိတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ချမ်းချမ်းဟာ လက်ရှိမှာဆိုရင် ခင်ပွန်းသည်ရှိရာအီတလီမှာသွားရောက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းချမ်းကတော့ မြန်မာပြည်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ သမီးကြီးကိုလည်း လွမ်းနေရင်း သမီးငယ်လေးအပေါ်မှာလည်း အရမ်းကိုချစ်ပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ချစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း သမီးငယ်လေးရဲံချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်. ချမ်းချမ်းကတော့ သမီးငယ်လေးနဲ့ အတူနေနေရပေမဲ့ သမီးကြီးကိုလည်း လွမ်းနေမှာအသေချာပါပဲနော်..
ချမ်းချမ်းတင်လာခဲ့တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုအောက်မှတော့ သမီးကြီးပါ အီတလီကို မခေါ်ဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို ချမ်းချမ်းက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သူမကိုယ်တိုင်လည်း မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ သမီးကြီးကိုလည်း လွမ်းနေတဲ့ချမ်းချမ်းကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချမ်းချမ်းတို့ သားအမိနှစ်ယောက် အမြန်ပြန်လည် ဆုံဆည်းနိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးသွားကြပါဦးနော်။